Baarlamaanka Turkiga oo meel mariyay in ciidamo la geeyo gudaha Qatar - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldBaarlamaanka Turkiga oo meel mariyay in ciidamo la geeyo gudaha Qatar
June 7, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Baarlamaanka Turkiga oo meel mariyay in ciidamo la geeyo gudaha Qatar. [Sawirka: Archive]
Ankara-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Turkiga ayaa meel mariyay sharci u ogolaanaya in ciidamadooda la geeyo saldhiga milatari ee uu Turkigu ku leeyahay gudaha Qatar.
Sharciga, ayaa ahaa mid qabyo ah tan iyo bishii May, balse maanta ayaa baarlmaanka ku meelmariyeen 240 cod, oo ay si weyn u taageereen xisbiga talada haya ee AK iyo xisbiga kale ee mucaaradka ah ee MHP.
Go’aanka maanta oo Arbaco ah ayaa u muuqda taageero Qatar iyada oo wajahaysa go’doon diblomaasi iyo mid ganacsi oo uga yimid dowladdaha ugu xooga badan Bariga Dhexe.
Turkiga ayaa ah saaxiib muhiim ah oo ay leedahay Qatar waxaana uu ka sameystay saldhig milatari gudaha Qatar sanadkii 2014-kii, Qatar ayaa sidoo kale waxaa kuyaala saldhiga ugu weyn ee ciidamada cirka Mareykanku ay ku leeyihiin Bariga Dhexe.
Madaxweynaha Turkiga ReccepTayyip Erdogan ayaa ku dhaleeceeyay Dowladdaha Carabta tilaabada ay qaadeen isaga oo sheegay in go’doominta Qatar iyo ku soo rogida cunaqabataynta aysan xal u keeni doonin wax walba oo dhibaato ah isaga oo intaas ku daray in Turkiga uu sameyn doono wax walba oo awoodiisa ah oo gacan ka geysanaya in khilaafka la dhammeeyo.
Garoowe-(Puntland Mirror) 18 kiis oo kufsi ah ayaa ka dhacay gudaha Puntland intii lagu guda jiray saddexdii bilood ee lasoo dhaafay, sida uu warbaahinta u sheegay masuul katirsan Puntland. Maxamed Xareed Faarax oo ah ku [...]